Phupha ngenqanaba Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngokungafaniyo nentaba, ithafa liyindawo ethe tyaba ngaphandle komehluko omkhulu kubude. Ngamanye amaxesha ithafa likwathetha uhlobo lwethafa elisentabeni okanye amathafa, njengoko kufumaneka kwezinye iintaba.
Imimandla emininzi yaseJamani, ngakumbi emantla nakunxweme, inokuchazwa njengamathafa angenazintaba okanye iintlambo zokwenyani. Ke nabani na olapha ekhaya uhlala kwinqanaba elinye. Ukanti abantu abaninzi mhlawumbi abazi nokuba: kubomi bemihla ngemihla akufuneki ukhathazeke malunga nohlobo lwembonakalo yomhlaba ohlala kuyo. Ngokwesiqhelo inqanaba libonakala kuphela ngaphandle kwesixeko, apho umbono okude kunokwenzeka kuphela ngenxa yezindlu ezingekhoyo.
Kananjalo ephupheni inqanaba lihlala livela kwimimandla yasemaphandleni, apho ukuphupha kuyaqonda ukuba akukho zinduli okanye ntaba zimjikelezileyo. Inqwelo moya luphawu lwakudala lwamaphupha adlale indima ekutolikeni kwamaphupha kwiinkulungwane ezadlulayo.
1 Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba kuthethwa ngokuchazwa kwephupha elidala kakhulu kunye nelodidi, ke uphawu lwephupha luhlala luseta intengiso isiganeko esimyoli Ke ukuba uphupha ngenqwelomoya, kunokwenzeka ukuba uya kuba kwixesha elizayo. Suerte kwaye uvuyo olukhulu luseza, kwaye unokwenza inkqubela phambili entle kwizicwangciso zakho ngelixa uvukile.
Ngamanye amaxesha iphupha lenqanaba likwaquka elinye isilumkiso Xa uphupha, kuhlala kuvela kwi-subconscious yakho. Ke mhlawumbi kuya kufuneka ndiyijonge Mngcipheko y Imiqobo hlala uvule into ongakhange uyiqaphele okanye ongafuniyo ukuyibona okwangoku.
Ngamanye amaxesha iphupha lisethafeni okanye ihewu kwaye lingajonga phantsi ukusuka kule ndawo liye kwinqanaba. Lo mfanekiso wephupha uhlala uluphawu lokuba uya kuyifumana eyakho ephupheni. emva kobomi qaphela, ukuba-kwimeko yethafa-ihlala idlula ngaphandle kobunzima obukhulu kwaye ngaphandle kweentaba ukoyisa.
Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo kwephupha kwinqanaba elinye kuhlala kubhekisa ngokomfuziselo kumanqanaba ahlukeneyo okuqonda kwamaphupha. Kuxhomekeka kwinqanaba olikhethileyo ekutolikeni kwakho, umfanekiso wephupha unokuba nomyalezo owahlukileyo. Isenokuba yimeko yokuba umntu wokuqala kufuneka abe namava athile kutoliko lwamaphupha ukuze abone ngokwenyani onke amanqanaba otoliko.
La manqanaba abonakaliswa ekulaleni, umzekelo, kwimeko yokuphupha xa uphupha. Ukuba imeko yakho ephupheni ayilunganga, ngoko ke ubandakanya inqwelo moya. isithukuthezi yokungabikho kwemingeni kunye neempembelelo ezintsha.
Ngakolunye uhlangothi, iphupha lakho lenqwelomoya likwimo entle, ke umfanekiso wephupha kufuneka ube Uqikelelo lwemozulu y ushwankathelo inokwenzeka kwinqwelomoya. Ke mhlawumbi xa uvukile, unokulindela yonke imiqobo enokubakho kunye nobunzima ngexesha lokuba ubasuse ngendlela ngexesha elifanelekileyo kwaye ungabavumeli babe yingxaki konke konke.
Ukuba umphezulu ugudile kwaye nasephupheni, emva koko unokulawula ubomi bakho bemihla ngemihla kwaye uphumelele nalapho. Nangona kunjalo, kufuneka ulumke ungaziqhelanisi nempumelelo engenziwanga kwaye uzive ukhululekile.
Uphawu lwephupha «inqanaba» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya kudityaniswe nenqwelomoya. Conocimientoengaphandle komgangatho ofanelekileyo.